Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. गुठी संस्थानले उद्देश्य अनुुरुप काम गर्न सकेन – Emountain TV
गुठी संस्थानले उद्देश्य अनुुरुप काम गर्न सकेन
काठमाडौं, २९ पुस । देशभरका गुुठीको संरक्षणका लागि स्थापना भएको गुठी संस्थानले उद्देश्य अनुुरुप काम गर्न सकेको छैन् । संस्थानले संरक्षण गर्न नसक्दा देशभर ५० हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । गुठी संस्थानले भने स्थानीय प्रशासनको असहयोगको कारण अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता हुन नसकेको दावी गरेको छ ।
गुुठी संस्थानको स्थापना भएको ५५ वर्ष भई सकेको छ । स्थापनाको पाँच दशक भन्दा बढी समय भइसक्दापनि गुुठी संस्थानले अहिलेसम्म अतिक्रमणमा परेका गुठीका जग्गाको एकिन विवरण संकलन गर्न सकेको छैन ।
गुठी संस्थानका ६९ जिल्लामा १४ लाख ५० हजार रोपनी जग्गा रहेको छ । लगभग ५० हजार रोपनी जग्गा मठ, मन्दिर, पार्टी तथा पौवाको नाममा अतिक्रमीत भएको छ । भने गुुठी संस्थानसँग आफ्नै भुुमि कहाँ कति अतिक्रमणमा परेको छ भने जानकारी छैन् ।
गुुठी संस्थानसँग अतिक्रमणमा परेको जग्गाबारे यकिन विवरण नहुुँदा कानुुनी उपचारको बाटो अपनाउनमा समेत समस्या देखिएको छ । स्थानीय प्रशासन तथा निकायका असहयोगका कारण अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता गराउन नसकेको गुुुठी संस्थानका कानुुनी सल्लाहकार ज्ञानेन्द्र प्रसाद पोखरेलको भनाई छ ।
नेपाल सरकारले गुुठी सम्पतिबाट प्राप्त हुने गुुठी रकम राज्यकोषबाट अलग गरी छुुट्टै निकायमार्फत व्यस्थापन र सञ्चालन गर्ने र गराउने उद्देश्यका साथ बिस. २०२१ सालमा स्थापना गरिएको थियो ।
संस्थानले हालसम्म पनि आफ्नो लक्ष्य अनुुरुपको काम गर्न नसकेको जग्गा अतिक्रमण बिवादले नै प्रष्ट पार्दै आएको देखिन्छ